China Desktop Chinyorwa Rockwell Hardness Tester HR-150A fekitori uye vagadziri | KAIRDA
Desktop Chinyorwa Rockwell Kuoma Tester HR-150A
Desktop Chinyorwa Rockwell Hardness Tester HR-150A inonyanya kushandiswa kuona kuomarara kweRockwell yesimbi simbi, isina-feri nesimbi uye isiri-yesimbi zvinhu. Iyo yekumhanyisa yekumhanyisa bvunzo yekumanikidza inogona kugadziridzwa neye buffering chishandiso, uye shanduko yedzvinyiriro inowanikwa nekushandura kweshanduko kusarudza ruoko vhiri. Kushanda kwemuedzo kuri nyore, nepo mashandiro acho akatsiga uye nekudaro muyedzo unokwanisa kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Tsanangudzo Model HV-30T Inotanga Pressure 98 ...
Desktop Chinyorwa Rockwell Hardness Tester HR-150A inonyanya kushandiswa kuona kuomarara kweRockwell yesimbi simbi, isina-feri nesimbi uye isiri-yesimbi zvinhu.
Iyo yekumhanyisa yekumhanyisa bvunzo yekumanikidza inogona kugadziridzwa neye buffering chishandiso, uye shanduko yedzvinyiriro inowanikwa nekushandura kweshanduko kusarudza ruoko vhiri. Kushanda kwemuedzo kuri nyore, nepo mashandiro acho akatsiga uye nekudaro muyedzo unokwanisa kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pakutanga Pressure 98N,
Yese Yekuyedza simba 588N, 980N, 1471N,
Rondedzero yeIndenter Conical diamond Rockwell indenter, 1.5875 mm bhora indenter
Kukwirira kwemaax ezvinyorwa (mm) 170mm
Kure kubva Indenter Center kusvika OuterWall 165mm
Saizi yeMuchina (DXWXH) (mm) 510 × 230 × 750
Kurema (kg) 85
Paunenge uchiyera, ndapota sarudza inopinda uye yakazara bvunzo simba maererano netafura inotevera.
Yakazara Yekuedzwa Simba N (kgf)
Zviratidzo Kuyera Range
Ball1.5888mm simbi bhora
120 ° dhayamondi
Iyo inoshandiswa kuyera simbi, kuoma kwayo kuri pamusoro peHRC 70 (senge tungsten carbide alloy, nezvimwewo) uye zvakare kuyera yakaoma mapepa mapepa uye epasi akadzima zvinhu.
Scale C: Iyo inoshandiswa kuyera kuomarara kwekupisa kwakarapwa simbi zvikamu.
Scale B: Iyo inoshandiswa kuyera yakapfava kana yepakati yakaoma simbi uye isina kuvharwa simbi zvikamu.
1 Rockwell Kuoma Tester 1Set
2 Yakakura tafura chipenga 1
3 Chidimbu chiduku chakagadzika 1
6 Simbi bhora inopinda -1.588mm 1
7 Simbi bhora Φ1.588mm 5, spares）
8 Rockwell yakajairwa block 80-88HRA 1
9 Rockwell yakajairwa block 85-95HRB 1
10 Rockwell yakajairwa block 60-70HRC 1
11 Rockwell yakajairwa block 35-55HRC 1
12 Rockwell yakajairwa block 20-30HRC 1
13 Yakakura screw driver 1
14 Mudiki sikuruira mutyairi 1
15 Bhokisi rekubatsira 1
Guruva nhoo 1
17 rairo yekushandisa 1
18 Chitupa 1
19 Kurongedza runyorwa 1
Kuchengetedza kweHARDNESS TESTER
1.Kana iyo muyedzo isiri kushandisa kwenguva yakareba, inofanira kuvharwa nevhavha isina guruva.
2.Zadza nguva nenguva mamwe muchina mafuta pane yekubata pamusoro peiyo screw (26) uye handwheel (27).
3.Usati washandisa muyedzo, suka kumusoro kwepamusoro peguruva (26) uye nepamusoro pekumusoro kwenzvimbo yechivharo.
4.Kana kukosha kwekuoma kwakaratidzwa kunowanikwa kwakakura mukukanganisa:
1) Bvisa chifukidzo uye woongorora kana pamusoro payo pakasangana nesikuru yakachena
2) Tarisa kuti jekete rinodzivirira rinotsigira kumusoro kwechivharo.
3) Tarisa kana mupineri akakuvara.
5.Kana uchishandisa main test simba, iyo chiratidzo pointer inotenderera nekukurumidza pakutanga uye zvishoma nezvishoma, zvinoreva kuti mafuta emuchina mubhafa ishoma. Mune ino kesi, simudza iyo inonzwa gasket kumusoro kwekupedzisira kweiyo bhafa (7), zadza zvishoma nezvishoma yakachena mafuta emuchina uye panguva iyi pusha uye dhonza kakawanda mawoko (15) (16) kuti uwane pisitoni kumusoro uye pasi nguva nenguva , uye kupedza mweya zvachose kubva kune bhafa kusvikira pisitoni yadonha kusvika pasi uye mafuta achipfachukira achibva pairi.
6.Shandisa yakajairwa bvunzo block inopihwa neye muedzo kuongorora nguva nenguva iko iko kweyekuoma tester.
1) Chenesa chivharo uye chiyero block uye woenderera bvunzo neinoshanda pamusoro pebhokisi. Hazvibvumirwe kuyedza neinotsigira pasi.
2) Kana iko kukanganisa kweyekukosha kukosha kuri kukuru, kunze kwekutarisa zvinoenderana nechinhu chechina chechitsauko chino, tarisa kana nzvimbo inotsigira yeyakajairwa test block ine mabhureki. Kana muchiitiko ichi, chiipure nedombo remafuta.
3) Kana kuyedza pane yakajairwa block munzvimbo dzakasiyana, iyo block inofanirwa kudhonzwa pamusoro pechivako uye kwete kubviswa kubva kune chipenga.
Pashure: Inotakurika Ultrasonic Kuoma Tester KH270W
Zvadaro: Dhijitari Bench Rockwell Hardness Tester HRS-150
Inotakurika Leeb Kuoma Tester KH180
Dhijitari Inotakurika Yekuoma Tester yeRollers K ...
Mahombekombe Durometer Kuomesa Tester Mahombekombe A Sore D ...
Mahombekombe D Durometer Kuomesa Tester
Inotakurika Ultrasonic Kuoma Tester KH270W